Geelle: Is afgarad iyo isu tanaasul ayaa lagu xalin karaa khilaafka u dhaxeeya dowlada iyo dowlad… – Hagaag.com
Geelle: Is afgarad iyo isu tanaasul ayaa lagu xalin karaa khilaafka u dhaxeeya dowlada iyo dowlad…
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay xaalada Soomaaliya, isagoo caddeeyay in is bedelo iyo soo kabasho badan ay ka jirto dalka.
Wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu kaga hadlay arrimaha gobolka, arrinta Kenya iyo iyaga ee Kursiga aan joogtada aheyn ee Golaha Ammaanka iyo xiriirka ayaga iyo Eritrea.
Mar wax laga weydiiyay arrimaha Soomaaliya ayuu sheegay in xaalada Soomaaliya ay soo kabasho badan ka jirto, waxaana uu xusay in Soomaaliya ku socoto dhanka wanaagga.
Waxaa uu sheegay in Jabuuti ay inta itaalkeeda isku dayeyso inay taageeraan shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka ay doorteen, isagoo xusay in Jabuuti ay ka qeyb qaadatay heshiiskii Ahlusuna iyo Galmudug.
Mar uu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ayuu sheegay in isu tanaasul iyo is afgarad lagu xalin karo.
“Is afgarad iyo isu tanaasul ayaa lagu xalin karaa, waa rajeynayaa in la gaaro, anaga quusta ma naqaano”ayuu yiri Madaxweynaha Jabuuti oo si kooban uga hadlayo khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Khilaafka ka dhashay doorashadii Axmed Madoobe ee dowladda Federaalka ay sheegtay in aanay aqoonsaneyn ayaa waxaa ay sababtay in dowladda ay ku soo rogto xayiraad ku aadan in diyaaradaha aanay tagi karin Kismaayo.